Critic » ပရို	25
ဒီ အရီး တော့ ဖွန်ကြောင်နေပြီ ပြောလဲ ပြောပေရော့။ ဟုတ်ပါတယ်။
ခင်ဇော် says: သများးရဲ့ AA ရောဂါ ကို အမြင်ကတ်နေကြတာ ၂ပတ်လောက်ရှိပြီ၊
ခင်ဇော် says: Zaw Thant ပို့စ် ထဲက သွားးယူလာတာ
Mr. MarGa says: ဟီဟိ အရီးရဲ့
အဲ့ပုံက အစည်းအ​ဝေးမှာရိုက်​ထားတာ​ကော၊ မတည်​လို့မရတဲ့နေရာလေ ဟို ပိုင်းလော့မ​လေးက သူ့အလုပ်​ခွင်​မှာရိုက်ပြီးတင်​တာလေ
ko six says: I agree it because of my poor-man. Heeee
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ​အောင်းမြ​လေး
​ဒေါ် လေး says: အရီး​ရေ AA ချုပ်​ကြီးက ဥပဓိရုပ်​​တော့ အ​တော်​​ကောင်း
မြစပဲရိုး says: သဘုံ ဘိလပ်လာရင် ရှင်ကားပူ ထရန်စစ် တော့ မလုပ်နဲ့ ကွယ်။
sorrow says: ဟိုလူကြမ်းကြီးနဲ့ နှိုင်းခံရတယ်လို့ .. ဟိုကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ..အသဲလေးက ကော်မာရှယ်ပိုင်းလော့ …တနည်း service industry က … မတူရေးချမတူ….
ဂျက်စပဲရိုး says: အရီး
အောင် မိုးသူ says: အို သားလေယာဉ်မယ်လေးကို မပြောနဲ့….. ဘူမှမစီး သားသူနဲ့တူတူစီးမယ်။ ငိငိ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .အင်း..ငါတျောက်ပဲ လိင်​ဗျံမှူး မကိုမသိ..ခေတ်မမှီချက်ကွာ..ကတောက်စ်
Alinsett @ Maung Thura says: ဒီအတိုင်းနေရင်း … ယူနီဖောင်းကျကျနန ဝတ်တာတော့ ထားပါတော့… (ပုခုံးမှာ ရှိနေတဲ့ အရစ်တွေ အပွင့်တွေ ပြချင်လွန်းလို့ ) စစ်ယူနီဖောင်းကြီးဝတ်ပြီး… မင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူတွေကိုရော.. အရီး ဘာပြောမလဲ… သတို့သမီးက… မြန်မာဆန်တဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့.. သတို့သားကတော့… ဗိုလ်ဝတ်စုံကြီးနဲ့..
ကျနော်တော့…အဲဒီလို မြင်ကွင်းမျိုးကို… ကြည့်ရတာ ထောင့်မကျိုး….ရေးချ မကျိုး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: မြရေ-
နျူးဘာဂိုဏ်းသား ဘယ်နှယ်ယောက်ရှိလဲ စာရင်းကောက်တာလားးးးး ကိုယ့်အတွေးကတော့ ………
သူ့ပရိုအလုပ်ကို စိတ်ချယုံကြည်ပြီး လေယာဉ်မစီးရဲပါဘူး ……. အချစ်အတွက်ဖြင့် အသက်ပင်သေသေဆိုပြီး သက်သေပြချင်တဲ့ နျူးဘာဂိုဏ်းသားတွေအတွက်တော့ အခွင့်အရေးကောင်းကို လက်မလွှတ်ကြနဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
nozomi says: အဲဒီ ဆဲလ်ဖီ ဆိုတာကြီး အကြောင်း ဒီ ရက်ထဲ ပြောချင်နေတာ
ပျံသန်းမှုကို မထိခိုက်ဘူး သူ တပါးကို မထိခိုက်ဘူး ဆို သူ ဘာ သာ ရိုက်တာ တင်တာ တွေက ဘာ မှ ပြောစရာ မရှိပါဘူး။ အခု တင်နေတာတွေလဲ လေယာဉ်မောင်း သင်တန်း တက်နေဆဲ ကာလ ငယ်ရွယ်တဲ့ အရွယ်မို့ လုပ်တဲ့ အပြုအမူ လို့ ပဲ ယူဆပါတယ် ၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်သွားရင်တော့ အသက်အရွယ်အရ လဲ ရင့်ကျက် လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ကြောင့်ပါ အရီးပြောတဲ့ ပရို ပီသ တဲ့ လူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် အဲဒီလို ဖြစ်မှလဲ အဆင်ပြေမှာ သူ တို့ လျှောက်ရမဲ့ လမ်း က လွယ်လွယ်လေးတော့ မဟုတ်ဘူးရယ်
မြစပဲရိုး says: အလိုလေးလေး အင်နဲ့အားနဲ့ အပြေးလာပြီး အကာအကွယ်ပေး နေလိုက်ကြတာ။
weiwei says: အရီးရေ ..
မြစပဲရိုး says: ဝေရေ
ကြောင်ဝတုတ် says: ပြောတော့ပါဘူးလေ….ခိခိ
Wow says: အရီးတစ်သက်လုံး လုပ်သင့်၊ ဖြစ်သင့်၊ စံထားသင့်တာတွေနဲ့ပဲ … အချိန်ကုန်နေတာလားဟင်.. သနားလိုက်တာအရီးရယ်… ဟီးးးးး (အသလွတ် ၀င်ရန်စသီ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အပြင်မှာ တကယ် မပရို နိုင်လို့ ဂလိုဘဲ အသံကောင်း ဟစ် ဟစ် ပြနေရတဲ့ ဘွပါအေ။
စာထဲ ရေးပြ ဆုံးမ ရတာ ဂလောက် လွယ်တာကို။ ဒါထက် ဒေါ်ဝါးလေးရော အရီးတို့ ရဲ့ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရေး ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် ထဲ ပါမား။
Wow says: ဟို..မယ်ဇီ ဒီအဖွဲ့ထဲပါရင်တော့ ခညာ၆ရှာတော့မှာပဲ အရီးရယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: နိ ဒို့ က ရေ ပုံမှန် ဖြန်းးပေးးးဂျအေ..!!!
မြစပဲရိုး says: ၆ရင် ပိုတောင် ကောင်းသေးဝုတ်ဘူးလား။
Wow says: တခြားမိန်းမနဲ့ ဖောက်ပြန်မှာ ပူရတော့ဝူး Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: တစ်ခြား ကျားကြီး နဲ့ ကြောက်ရသေးလယ်။ lol:-)))